Sokiro Water Chiller - China Ningbo Hicon Industry
Unit dia manasongadina: 1.The rafitra orinasa no vokatra mahazatra, dia afaka manolotra R22, R407C, R134A telo karazana refrigerants mba hitsena ny fitakiana ny firenena samy hafa sy ny faritra. 2.Supre manerana fahafahana isan-karazany avy any 170KW ~ 4800KW noho ny fifidianana malalaka, manolotra ny vondrona amin'ny 1,2,3,4 compressor. 3. Ny tarika dia afaka hanatitra ny 8 kilasy ny MIN 12.5% ​​angovo fitsipika hanome fahafaham-po ny mpanjifa ny angovo-mamonjy fepetra. 4.The andian-dahatsoratra sampana dia afaka manolotra ny hafanana fanarenana functionsof 30%, 50%, 75%, 100% toy ny isan-ny indray ...
1.The orinasa tarika no vokatra mahazatra, dia afaka manolotra R22, R407C, R134A telo karazana refrigerants mba hitsena ny fitakiana ny firenena samy hafa sy ny faritra.
2.Supre manerana fahafahana isan-karazany avy any 170KW ~ 4800KW noho ny fifidianana malalaka, manolotra ny vondrona amin'ny 1,2,3,4 compressor. 3. Ny tarika dia afaka hanatitra ny 8 kilasy ny MIN 12.5% ​​angovo fitsipika hanome fahafaham-po ny mpanjifa ny angovo-mamonjy fepetra. 4.The andian-dahatsoratra sampana dia afaka manolotra ny hafanana fanarenana functionsof 30%, 50%, 75%, 100% toy ny isan-ny fepetra takiana amin'ny mpanjifa. 5. Ny tarika mandany fampisehoana avo-marika malaza sy semi-hermetic srew compreesor sy fahombiazana avo akorany & Tube hafanana eo ho eo exchanger.The COP ambony noho 4.5.
6.SIEMENS marika plc maso, milamina sy mora fampisehoana fandidiana.
7.The hipoaka ny rano mari-pana azo ahitsy amin'ny 5 ka hatramin'ny 15 ℃ ℃, ary azo ampiasaina amin'ny fampiharana ny indostria. 8.The tarika maro fitaovana fiarovana sy ny anjara asa, anisan'izany ny hery fiarovana
(Toy ny tsy fahampian'ny-dingana, anti-dingana,), compressor maotera fiarovana, afaka mandatsa-dranomaso Temp ny fiarovana avo-, ambony / ambany fanerena, anti-matin'ny hatsiaka, compressor fiarovana be loatra, ny rano Temp overlow fiarovana.
Previous: Tondra-drano visy Water Chiller
Manaraka: Scroll Water Chiller
Air tony Sokiro Chiller Price
Air tony Screwed Chiller
Air Sokiro Chiller
Tony Sokiro Chiller
Double Sokiro Industrial Water Chiller
Fahaizan'ny Trondro avo Sokiro Water Chiller
Industrial Air Sokiro Chiller
Industrial Sokiro Chiller
Industrial Sokiro ny rano Chiller
Industrial rano tony Sokiro Chiller
Industry Sokiro Chiller
Recirculating Sokiro Chiller
Sokiro Air tony Chiller
Sokiro Chiller Price
Sokiro Marina Water Chiller
Sokiro Type rano tony Chiller
Sokiro Type Chillers rano tony
Water Chiller Sokiro Chiller
Rano tony Sokiro Chiller For Sale
rano tony Sokiro Chillers
Rano tony Sokiro Water Chiller
Water Sokiro Chiller